ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 6/1/09 - 7/1/09
အ ချစ်ရယ် ငါ့နှလုံးသာဟာ
စမ်း သပ်ပစ်မှတ် တခုတဲ့လားကွယ်
သပ် သပ်မဲ့ မင်းလုပ်ရပ်က
ခံ စားရသူ ရင်ကိုထိစေတယ်
ငါ့နှလုံးသာ မင်းရဲ့ စမ်းသပ် ပစ်မှတ် ဖြစ်ခဲ့ရ။
ဟိုး..တချိန်က.. မိတ္ထီလာ အဝေးသင် တက္ကသိုလ် တက်စဉ်က ညစ်ညစ်နဲ့ ရေးခဲ့ဖူးတယ် စာလေးပါ။
DatE Sunday, June 28, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
Pop star Michael Jackson dies in LA.
Pop star Michael Jackson dies in Los Angeles
at the age of 50, after sufferingasuspected cardiac arrest.
DatE Friday, June 26, 2009 LaveL ထူးခြားသတင်း0comments link this
လိုဂို အသစ်နဲ့ လူငယ့်အားမာန်
လူငယ့် အားမာန် လိုဂို အသစ်လေးပါ။
ယခုဆို လူငယ် အားမာန် အဖွဲ့လေးက လုပ်ငန်းတွေ စလုပ်ပါပီ။
ကျွန်တော် မွေးရပ်မြေ လက်ပန်ကျင်း အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း အတွက် ပညာရေး အထောက်ကူပြု စာအုပ်များ၊ အပါတ်စဉ်ထုတ် သတင်းစာ ဂျာနယ်များ လှူဒါန်းပါမယ်။ ငွေကျေး အရင်းနှီးကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က မတည်ထားခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး စေတနာ နဲ့ နိုင်သလောက် ပါဝင်ထည့်ဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လကို အနည်းဆုံး ငွေသား သုံး သောင်းဖိုး လစဉ် လှူဒါန်းပါမယ်။ ရန်ကုန် ရှိ စားသောက်ဆိုင် နှင့် company များတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင် ကြသော ညီငယ် လေးများ၏ ပါဝင် မှုကို အထူးဂုဏ်ယူမိပါသည်။
နောက်နှစ်များမှာ ဒီထက်မက လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ အဖွဲ့ဝင်များ တိုးလာအောင် ထပ်မံ စည်းရုံး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတိပုည ဂုဏ်မာန တဲ့ ကျေးလက်က ရွာငယ်လေးက ကျွန်တော့ ဇာတိပါ။ အေးချမ်းလှတဲ့ လက်ပန်ကျင်း ရွာသားလေး ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူ မိပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ ရေးရတာကတော့ နတ်လူ သာဓုခေါ်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
DatE Friday, June 19, 2009 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
အချစ်နဲ့ ငါ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။
အချစ်နဲ့ငါ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့
ငါ့စကားကို မင်းက ချေဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။
အငမ်းမရ နောက်ကလိုက်လို့ နားထောင်နေတယ်။
အချစ်ငတ်တဲ့ ငါ့နှလုံးသားက ပြောတယ်
တခါးဖွင့်လျှက် မင်းရှေ့မှာ အဆင်သင့်ရှိနေလေရဲ့။
>> သူများရေးတာအားကျလို့ ရေးကြည့်တယ် <<
DatE Friday, June 12, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
ကျို့ကုန်း ဘူတာက ထွက်လိုက်လို့
ဒီ ခရေပင်တန်း ကိုဖြတ်လျှောက်မိရင်
တခါက ခရေကောက်ဖူးတဲ့ အတိတ်ဆီကို
မုခ်ဦးမှာ ဖီးဆင့်စက်ဘီးတွေ တန်းစီလို့
စေတီကြီးဘုရားရင်ပြင်တော်မှာ ချစ်သူစုံတွဲများ သစ္စာပြု။
မိသားစုတွေ ကလေးတွေလည်း ဘုရားဖူးလို့ နေကြတယ်။
ခရေနံသင်းတဲ့ လေနုအေးကိုရှူ ၊ အေးမြတဲ့ ကြွေပြားအခင်းပေါ်မှာ ထိုင်လို့
ကမ္ဘာမြေ အေးချမ်းစေဖို့ တောင်းဆုတွေပြု။
ခရေပင်အောက်မှာ ခရေချစ်သူတွေ ခရေပန်းကောက်နေကြတယ်။
ဟိုး.. ကောင်းကင်က ကြယ်လေးတွေ ကြွေကျလာသလိုပဲ။
ဟော.. ဟိုမှာကြည့် လေထဲမှာ ၀ဲပျံလို့ ချစ်စရာလေး။
လေပြေ အဝှေ့မှာ ခရေပန်းလေးတွေ ၀ဲပျံလို့ကျလာတယ်။
တပင်တည်း ခရေပင်မှာ ခရေပန်းကောက်သူတွေကများလှတယ်။
လေထဲမှာ ၀ဲပျံနေတဲ့ ခရေပန်းလေးတွေ မော့်ကြည့်လို့
မြေပေါ်မကျခင် ဖမ်းနိုင်ဖို့ ပြင်နေကြတယ်။
အော်.. ခရေပင်ကြီးရယ် ခရေချစ်သူတွေရယ် ပျော်စရာ အတိ။
လေမှာ ၀ဲပျံတဲ့ခရေပန်းလေးတွေ ကောက်ချင်သေးတယ်။
DatE Monday, June 08, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
ဒီရက်ပိုင်း ကိုညီလင်းဆက် သို့ ပေးစာ ပို့စ်ကို ရေးလိုက်တာ ဘလော့ကို ထိချက်တွေ မနည်းပါလာတယ်။
သတိထားမိတယ် ၂၀၀ ကျော်လောက်တက်လာတယ်။ ဒီစကားလုံး ရှာတဲ့သူတွေ အနံခံပြီး ရောက်လာ နေကြဦးမှာပဲ ။ ပို့စ် ကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ တမျိုးကောင်းတာပေါ့လေ။
ကျနော်ရေးတဲ့စာကလဲ နည်းနည်းကြမ်းသွားတယ်။ အမှန်တကယ် ဂူဂဲမှာ ပေါ်တဲအတိုင်း ရေးလိုက်တာ ။ စိတ်ထဲ မခံချိ မခံသာ ဖြစ်လွန်းလို့ပါဗျာ။ ထူးထူးခြားခြား ထိချက်တွေ တက်လာတာတော့ သိလိုက်ရတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ထိချက်ယူ ငွေရှာနေကြတာကို လက်တွေ့ သိလိုက်ရတာတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးကလဲ လူနဲ့ လူပတ်ပန်းကျင်မှာ ရှိနေဦးမှာပဲ။
ပြန်တွေးကြည့်တော့လဲ စာလာဖတ်တဲ့ အားပေးတဲ့ အကို အမများကို အားနာပါတယ် ။
DatE Sunday, June 07, 2009 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this
စိန်ပန်းတွေ မြေမှာကြဲတဲ့ ကျောင်းဖွင့်ချိန်။
အတိတ်က ပုံရိပ်တွေ ကြာခဲ့ပေမယ့် အမှတ်ရနေဆဲ။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ.... ဖိုးရာဇာ ကျောင်းဆောင်ရှေ့ အေးမြတဲ့ မယ်ဇလီပင်ရိပ်မှာ
ကမ္ဘာမြေကို ဖင်ခုထိုင်လို့ စာသင်ခဲ့တဲ့ မင်းတို့ ငါတို့ ငယ်စဉ်က ဘ၀ကို ငါ သတိရနေတယ်။
ကျောင်းဥယျာဉ်မှာ စံပယ် ကြက်ရုံး၊ ဇွန်ပန်း၊ ရွှေပန်းပင်၊
စိန်ပန်းပင်၊ ဒန်းပန်းပင် တွေ တူတူစိုက်ခဲ့ကြတာ ငါ သတိရနေတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ...... နိုင်ငံတော်အလံ အလေးပြုစဉ် ကျောင်းနောက်မှာ ခိုးပုန်းလို့
ခြင်းလုံးခတ်ခဲ့တာကြောင့် သုံးယောက်တည်း နိုင်ငံတော် အလံကို အလေးပြုပြီး
ကျောင်း ငါးပတ် ပတ်ပြေးခဲ့ရတာ ငါ သတိရနေတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ........ စာရလျှက်သား စာပြန်ရမှာ ပျင်းလို့
သုံးယောက်သား ညာညှိကာ စာမရဘူး ဘူးခံခဲ့လို့
အရိုက်ခံရတာ သိပ်မနာပေမယ့် ဆရာမ စိတ်ဆိုးသွားလို့ ချော့ခဲ့ရတာ ငါသတိရနေတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ....... ဆောင်းကာလ နှင်းတွေသီးနေတဲ့
ပဲစိမ်းငုံ ခင်းကိုတိုးလျှို ဖြတ်ရင်း နေမင်းကိုဦးတည် လမ်းလျှောက်လို့
ထမင်းချိုင့်ကိုယ်စီနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျောင်းသွားတက်ရတာ ငါ သတိရနေတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ... အဌမတန်း စာမေးပွဲပြီးနောက်
တို့တွေခွဲခွာခဲ့ရ အတော်ကြာခဲ့ပြီ။ စိန်ပန်းတွေလဲ အကြိမ်ကြိမ် ပွင့်ခဲ့ပြီ။
သို့ပေမယ့် ဒီလိုကျောင်းဖွင့်ချိန်ရောက်တိုင်း သူငယ်ချင်းတို့ကို ငါသတိရနေတယ်။
အခုလဲ စိန်ပန်းတွေ မြေမှာကြဲတဲ့ ကျောင်းဖွင့်ချိန်ရောက်ပြန်ပီလေ။
DatE Thursday, June 04, 2009 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
DatE Wednesday, June 03, 2009 LaveL ကွန်ပျူတာ မြန်မာစာ5comments link this